Onitsha Tanker Accident: 'A mapụrụ m na Keke bu anyị mana 'tanker' kwọgburu ndị m na ha so' - BBC News Ìgbò
Onitsha Tanker Accident: 'A mapụrụ m na Keke bu anyị mana 'tanker' kwọgburu ndị m na ha so'
Media captionOnitsha Tanker Accident : Clement Jackson so n'ụfọdụ ndị mmadụ merụrụ ahụ na-anata nleta n'ụlọọgwụ anyị' - Dọkinta
Clement Jackson so na otu onye dị ndụ ka ụgbọala "tanker" kwọgbuchara ọtụtụ mmadụ n'Onitsha.
Tanka bu mmanụ ọkụ dapụrụ na "gear" kwọgbuo opekata mpe mmadụ asaa n'Ọnịcha, Anambara steeti ụbọchị Wenezde.
Jackson kwuru na ya mapụrụ na 'Keke' bu ya, ka ọ hụrụ ụgbọala "tanker ahụ" mana ọ kwọgburu ndị ya na ya so.
Nkenke aha onyonyo Chijoke Ojiugo si Abuja n'ala Enugwu mgbe ihe mberede zutere ya
Chijoke Ojiugo sị Abuja na-ala Enugwu steeti maka akwamozu mama nnukwu ya oge ihe mberede ahụ jiri zute ya n'Upper Iweka.
Ojiugo onye merụrụ ahụ n'ụkwụ kwuru na " E sim Abuja bata na-aga maka akwamozu mma nnukwu m, amaghị ka ihe a si mee m hụ onwe ya n'ụlọọgwụ."
Nkenke aha onyonyo Lilian Nwankwo so na ọtụtụ ndị na-ebugharị ahịa n'ebe ihe mberede ahụ mere
Onye ọzọ bụ Lilian Nwankwo na-ebugharị ahịa n'ebe ihe mere mberede ahụ kwuru na "amaghị m ka o siri mee, e nwetara m onwe m n'ụlọọgwụ a."
Kirie ka ịhụ ka ndị ọzọ dị ndụ si zere ọnwụ n'ihe mberede a:
Gọvanọ Anambara agaala ebe ihe a mere
Aka na-chị Anambra steeti bụ Willie Obiano agaala ebe ihe mberede okporoụzọ mere n'Onicha ma kwuo na a ga-enyocha ihe kpatara ya.
Obiano kwuru na ihe a metụtara ndị na-ebugharị ahịa n'isi ya mere o ji arịọ ka ndị mmadụ kwụsị ị bụgharị ahịa n'okporoụzọ.
Buhari, Atiku etiela ndị Anambara aka n'obi maka mberede tanka
Technovation: Lee ụlọakwụkwọ ụmụaka ise ahụ turula ugo ọkaibe n'asompi technụzụ'Esi m Abuja ala Enugwu maka akwamozu mama nnukwu m were hụzịa onwe m n'ụlọọgwu'
O kwukwara na ọ ga-eleba anya n'ihe gbasara etu ụzọ ebe ihe a mere si gbagọ agbagọ makana ihe mberede mere ebe a hụ n'afọ 2015 gburu ọtụtụ mmadụ.
Obiano rịọrọ ka ndị Anambra na-ewe ịnshọransị ndụ maka udiri ọdachi a.
Cheta na site n'ozi kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ depụtara ụnyahụ, na Obiano kwuru na ọ ga-akwụ ego ụlọọgwụ niile ebe ndị ihe mberede a mere na-anata ọgwụgwọ.
Buhari etiela ndị Anambara aka n'obi
Nkenke aha onyonyo Buhari ekelel ndezinaụlọ ihe mberede ụgbọala mmanụ ọkụ metụtara
Cheta na onyeisiala Muhammadu Buhari na onye zọrọ ọkwa onyeisiala na ha PDP bụ Atiku Abubakar atasiela Gọọmentị Anambara steeti nakwa ndị Anambara ndị ihe metụtara obi maka ihe mberede ụgbọala mmanụ ọkụ nke mere na steeti ahụ.
Ọkụ agbagbuola mmadụ anọ n'okporouzọzọ
Nne ụmụaka atọ ọkụ gbagburu kpochiri ha n'ụlọ pụọ
Ihe mberede a nke mere na nso ụlọogwụ Toronto Hospital dị n'Upper Iweka, merụrụ ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere ndị na-agafe agafe, ndị nwe ụlọahịa na ndị ọzọ, ahụ.
Otu onye nọ oge ya bụ ihe mere, kwuru na ihe nwụrụ ruru iri atọ ma kọwaa na ọkwọụgbọala tanka ahụ hapụrụ ya gbalaga ozugbo ihe mberede ahụ mere.
Nkenke aha onyonyo Muhammadu Buharinwetara ohere ịchị agba nke abụọ dịka o merichara na ntuliaka 2019
N'ozi ya nke o wepụtara n'igwe ogwu Twitter ya Buhari kwuru na "Ana m akasi ezinaụlọ ndị tụfuru ndụ ha na ihe mberede 'tanker' mere n'Ọnicha obi."
O kelekwara gọọmenti Anambara steeti na ndị Anambara ma kpe ekpere ka Chineke gba ndị mmadụ nwụnarịrị obi ma mee ka ndị merụrụ ahụ gbakee ngwa ngwa.
Atiku tikwara ha aka n'obi
N'ozi ya, Atiku Abubakar kwuru na "ọ dị m obi mwute na ihe ruru mmadụ isii nwụụ ebe mmadụ iri na anọ merụrụ ahụ na mbere okporoụzọ mere n'Upper Iweka , Onitsha."
Image Copyright @atiku @atiku
Image copyright Odinaka/ABS
Onye ntaakụkọ ABS rutere ebe ahụ ka ihe a mere, kwuru na ebupula ụgbọala tanka ahụ ebe ahụ.
Ka ọ dị ugbua, gọvanọ Willie Obiano ehiwere kọmiti nke kọmishọna na-ahụ maka njem nọ n'isi ya ga-enyocha ihe mere na mberede ahụ.
Media captionOnitsha Tanker Accident : 'Ọtụtụ mmadụ anwụọla tupu ebute ha n'ụlọọgwụ anyị' - Dọkinta
Technovation: Lee ụlọakwụkwọ ụmụaka ise ahụ turula ugo ọkaibe n'asompi technụzụ
Obiano rịọrịọ ka ndị Anambra na-ewe ịnshọransị ndụ maka udiri ọdachi a.
N'ozi ya, Atiku kwuru na "ọ dị m obi mwute na ihe ruru mmadụ isii nwụụ ebe mmadụ iri na anọ merụrụ ahụ na mbere okporoụzọ mere n'Upper Iweka , Onitsha."
Aka na-chị Anambara steeti bụ Willie Obiano agaala ebe ihe mberede okporoụzọ mere n'Onicha ma kwuo na a ga-enyocha ihe kpatara ya.
O kwukwara na ọ ga-eleba anya n'ihe gbasara etu ụzọ ebe ihe a mere si gbagọ agbagọ n'ihi ihe mberede mere ebe ahụ n'afọ 2015 gburu ọtụtụ mmadụ.
Obiano rịọrọ ka ndị Anambara na-ewe ịnshọransị ndụ maka udị ọdachi a.
Cheta na site n'ozi kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ depụtara Tọzde, na Obiano kwuru na ọ ga-akwụ ego ụlọọgwụ niile ebe ndị ihe mberede a mere na-anata ọgwụgwọ.
Onyeisiala Muhammadu Buhari na onye zọrọ ọkwa onyeisiala na ha PDP bụ Atiku Abubakar atasiela Gọọmentị Anambara steeti nakwa ndị Anambara ndị ihe metụtara obi maka ihe mberede ụgbọala mmanụ ọkụ nke mere na steeti ahụ.
Image copyright Odinaka/Anambra
Ndị ụlọomeiwu Imo steeti a ga-enye ọchịchị Ihedioha nkwalite?
Kedụ ihe ị ma maka ada Igbo ji eje mba bụ Dehlia Umunna?
Naịjirịa anyụnyela Libya mmamiri n'anya